Tadalafil- Onye nrụpụta nrụpụta nrụpụta
CMOAPI nwere akụrụngwa akụrụngwa nke Tadalafil, ma nwee njikwa njikwa dị mma ..Agabiga GMP na asambodo DMF.
Kedu ihe bụ Tadalafil
Tadalafil bụ ọgwụ ọgwụ eji agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa erectile (ED) yana mgbaàmà nke ịbawanye prostate na ụmụ nwoke. A na-egosikwa ya ịgwọ ọbara mgbali elu (PAH).
Tadalafil (Nọmba CAS: 171596-29-5) dị n'ụdị mbadamba ọnụ ma ọ bụ tadalafil uzuzu ma na-ere ya n'okpuru aha Cialis (maka nrụrụ erectile ma ọ bụ nnukwu prostate) ma ọ bụ Adcirca (maka ọbara mgbali elu). Tadalafil dịkwa na ụdị ọnụọgụ ya nke nwere ike ọ gaghị enwe ike niile dị ka nhazi mbụ
Kedu ka tadalafil si arụ ọrụ?
Tadalafil bụ otu n'ime ndị na-emechi ụdị 5 (PDE5) nke phosphodiesterase. Mgbe otu ọgwụ ndị a na-egbochi PDE5 ha na-eme ka ọrụ erectile dịkwuo elu.
N'oge agụụ mmekọahụ, ọkpụkpụ na-eme mgbe enwere ọbara zuru oke na akwara penile nke na-ebute akwara izu ike na akwara dị nro nke corpus cavernosum. Nzaghachi a na-edozi site na mmepụta nke nitric oxide (NO) na sel endothelial na akwara akwara. Ntọhapụ nke NO na-eme ka njikọ nke cyclic guanosine monophosphate (nke a na-akpọkarị GMP ma ọ bụ cGMP cyclic) dị na sel ahụ dị mma. GMP ahụ na-enyere aka mee ka uru ahụ dị nro na-eme ka ọbara na-asọba na corpus cavernosum.
Tadalafil na-egbochi ụdị 5 (PDE5) nke phosphodiesterase site na ịba ụba nke cGMP. Ọ dị mma ịkọba na mmadụ ga-enwerịrị mkpali mmekọahụ iji malite mbupute nke nitric oxide. Nke a bụ n'ihi na nsogbu Tadalafil agaghị eme na-enweghị mkpali mmekọahụ.
Tadalafil nwere ike belata mgbaàmà nke gland prostate gbasaa gụnyere urination ọsọ ọsọ / ugboro ugboro, nsogbu na nsị, na urinary incontinence. Ọ na-eme nke a site na izu ike ahụ na prostate na eriri afo.
Na ọbara mgbali elu, tadalafil na-enyere aka mee ka akwara ọbara dị n'ime obi. Nke a na - enyere aka ịbawanye n'ọbara na ngụgụ ma na - ebelata ọrụ obi.
Intermediates nke Tadalafil
N'ime usoro ịmepụta tadalafil (CAS 151596-29-5), a na-ahazi ụfọdụ ndị nnọchi anya. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ga-eji tadalafil intermediates mepụta tadalafil.
Tadalafil (CAS 171596-29-5) bụ ọgwụ ndenye ọgwụ dị ike ma dị irè maka ịgwọ ọrịa na-erectile na ịba ụba nke prostatic na ụmụ nwoke yana ọbara mgbali elu.
Cas 171489-59-1 akpọkwara dị ka Chloropretadalafil bụ etiti dị na mmepụta nke Tadalafil eji mee ihe n'ịgwọ ọrịa nrụrụ erectile. CAS 171489-59-1 nwere usoro ihe omimi C22H19ClN2O5 nwere ihe omimi nke 426.85 g / mol. A na-enweta ya n'ụdị nke siri ike na-acha ọcha.
CAS 171752-68-4 nke ihe omuma ya bu C20H18N2O4.HCl na ihe omimi nke 386.83 g / mol bu kwa onye ozo tadalafil.
E nwere ọtụtụ ndị na-eweta tadalafil intermediates ndị na-enye tadalafil intermediates maka ire ere na asọmpi ọnụahịa. Otú ọ dị, mgbe ị tụlere tadalafil zụta ya n'aka ụlọ ọrụ ndị tụkwasịrị obi iji hụ na ogo adịghị oke.
CMOAPI bụ otu n'ime ndị na-eweta ngwaahịa tadalafil nke na-ekwe nkwa ịdị mma na ọnụahịa nke ngwaahịa ha.
Onye na otu esi eji tadalafil
Tadalafil uzuzu nwere ike ịgwọ ndị na-esonụ n'ime ụmụ nwoke?
Erectile na-arụ ọrụ
Erectile dysfunction (ED) a na-akpọkwa enweghi ike bụ ọnọdụ na ụmụ nwoke na ha enweghị ike ịnweta ma ọ bụ debe ụlọ maka oge zuru ezu iji nwee mmekọahụ. Ọ na-edugakarị n'inwe mmasị na mmekọahụ ma ọ nwere ike ibute nsogbu ndị ọzọ dịka ịla n'iyi ma ọ bụ igbu oge na mgbe ụfọdụ enweghi ike iru orgasm.
ED nwere ike ibute ọtụtụ ihe kpatara ya ma ọnọdụ anụ ahụ na nke mmetụta uche dịka ọrịa ụfọdụ dị ka ọrịa shuga, ọrịa obi, na ọbara mgbali elu, afọ, nchekasị, ma ọ bụ ọbụlagodi mmekọrịta.
Tadalafil na-enyere aka ịgwọ ED site na ịbawanye ọbara na amụ. Nke a na - enyere aka iru ma debe ụlọ. Otú ọ dị, tadalafil na-enyere aka na erection mgbe mmadụ na-akpali agụụ mmekọahụ.
A na-akpọkwa ya dị ka mgbatị nke prostate, BPH bụ ọnọdụ nkịtị a na-ahụkarị na ụmụ nwoke mgbe ha mere agadi. Agbanyeghị, ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ọrịa prostate gbasaa gụnyere ọrịa shuga na ọrịa obi, ibi ndụ, yana oke ibu yana akụkọ ntolite ezinụlọ nke BPH. Mgbe prostate na-ebuwanye ibu, ọ nwere ike ibute ọnọdụ urinary.
Mgbaàmà ndị metụtara gland prostate gbasaa bụ, na-agba ọsọ ngwa ngwa na urinate, na-enwe nsogbu ịmalite urinate, mmiri mmamịrị na-esighi ike, ma ọ bụ enweghị ike iwepụ eriri afọ ahụ kpamkpam. Ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke BPH nwere ike ịgụnye ọrịa urinary tract (UTI), enweghị ike ịmị mamịrị, ma ọ bụ ọbara n'ime mmamịrị ahụ.
Tadalafil uzuzu ma ọ bụ mbadamba na-enyere aka ime ka akwara dị na prostate na eriri afo. Nke a na-enyere aka belata mgbaàmà nke BPH.
Ọbara akpa ume ọbara mgbali elu (PAH)
PAH bụ ọnọdụ ọbara mgbali elu dị na akwara ọbara na-enye ọbara na ngụgụ. Ọ dị iche na ọbara mgbali elu nkịtị. Ọ na - eme mgbe akwara akwara si n’obi rue ngụgụ dị warara ma ọ bụ egbochie ya.
Ihe mgbaàmà kachasị ama gụnyere mgbu obi, ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ ọzịza na ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ gị.
Tadalafil nwere ike inye aka belata mgbaàmà nke PAH site na ime ka arịa ọbara dị na ngụgụ ume nke na-eme ka mmụba ọbara na-aga n'ihu.
Kedu esi eji tadalafil?
Agedị tadalafil dabere na afọ gị, iji ya eme ihe, yana nsogbu ọ bụla gbasara ahụike.
A naghị atụ aro iji Tadalafil maka ụmụaka n'okpuru afọ 18 ka ndị agadi gafere afọ 65 kwesịrị ịkpachara anya ebe ọ bụ na ahụ ha na-ewe ogologo oge ịmị ọgwụ ndị a.
Enwere ụkpụrụ nduzi doro anya banyere otu esi eji ntụ ntụ tadalafil mana ụdị kachasịkarị bụ mbadamba tadalafil n'okpuru aha dị iche iche.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji tadalafil otu ugboro kwa ụbọchị ma were ya n'otu oge kwa ụbọchị iji nweta uru tadalafil.
A kọwapụtara usoro ọgwụgwọ tadalafil maka ojiji dị iche iche;
Maka nrụrụ erectile, a na-ewere ọgwụ nke 2.5-5 mg kwa ụbọchị ma ọ bụ 10 mg mgbe a na-ewere ya otu ugboro dịka mkpa ọ bụla.
Maka hyperplasia prostatic na-adịghị mma, a na-atụ aro ọgwụ 5 mg na-ewere kwa ụbọchị. E kwesịrị ịadaụ Tadalafil otu ugboro kwa ụbọchị.
Mgbe ị na-emeso ọnọdụ abụọ ahụ (nrụrụ erectile ma gbasaa prostate) usoro ọgwụgwọ 5 mg kwa ụbọchị kwesịrị ekwesị.
Site na ọbara mgbali elu ọbara, a na-atụ aro usoro ọgwụ tadalafil nke 40 mg kwa ụbọchị.
Dị ka ọgwụ ndị ọzọ, ihe na-arụ ọrụ maka otu nwere ike ọgaghị eme otu ihe ahụ onye ọzọ. Uzo ozo nke Tadalafil di. Otú ọ dị, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịgwa dọkịta gị gbasara ndị dịnụ tadalafil ndị ọzọ ma hụ nke kachasị gị mma. Enwere ike ịgwa gị ka ị were ndị ọzọ tadalafil ma ọ bụrụ na ị na-arịa tadalafil ma ọ bụ n'ihi ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ọrụ gị ịkọba ihe na-arụ ọrụ nke ọma maka gị mgbe ị na-achịkwa tadalafil bụ nhọrọ ma ọ bụ mmetụta nke tadalafil na-akwụ ụgwọ uru tadalafil.
Kedu ọdịiche dị n'etiti Tadalafil na ọgwụ ndị ọzọ maka nrụrụ erectile
Cialis bụ ọgwụ ederede edere na klaasị ọgwụ ndị a na-akpọ Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors. A na-eji ya agwọ ihe mgbaàmà nke nrụrụ erectile. Enwere ike iji ya naanị ma ọ bụ tinye ya na ọgwụ ndị ọzọ.
A na-ekewa Dapoxetine hydrochloride dị ka onye na-eme ngwa ngwa serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).
Dapoxetine hydrochloride bụ ọgwụ edebanyere aha iji na-emeso ejaculation akaghi aka. Ejaculation oge ochie bụ ọnọdụ dịkarịsịrị ụmụ nwoke nke metụtara enweghị ike igbu oge. Nke a bụ otu ihe mgbaàmà nke nrụrụ erectile na ụmụ nwoke.
Ọ bụ ezie na eji tadalafil na dapoxetine hydrochloride na-agwọ ihe mgbaàmà nke nrụrụ erectile, otu tadalafil bụ onye na-eme ihe na phosphodiesterase ebe onye nke ọzọ, dapoxetine, bụ onye na-emechi ihe nchịkwa serotonin.
Vardenafil bụ ọgwụ na otu ọgwụ ọgwụ akpọrọ phosphodiesterase (PDE) inhibitors. A na-eji ya agwọ ọrịa nwoke erectile. Mgbe nwoke ahụ na-akpali agụụ mmekọahụ, vardenafil na-eme ka ọbara na-asọba na amụ na-eme ka o doo anya na ị ga-enwe ụlọ.
Vardenafil rere n'okpuru aha aha Levitra bụ nhọrọ dị oke mma karịa sildenafil na tadalafil (Cialis) na PDE5. Nke a pụtara nanị na achọrọ obere vardenafil na obere mmetụta dị obere.
Ihe ọzọ dị ịrịba ama bụ na ọkara ndụ ebe vardenafil (Levitra) nwere ọkara ndụ nke 4-6 awa mgbe tadalafil (Cialis) nwere ọkara ndụ nke 17.5 awa. Nke a pụtara na Tadalafil (Cialis) na-eme ogologo oge karịa vardenafil.
Avanafil bụ ọgwụ dị na otu ndị na-emechi phosphodiesterase. A na-ejikwa ya iji gwọọ nrụrụ erectile site na imeziwanye ọbara na mpaghara penile.
Ọ bụ ezie na avanafil na tadalafil bụ ndị na-emechi phosphodiesterase, avanafil bụ nke kachasị ọhụrụ ma nwee obere ndụ nke ihe dịka 5 awa karịa tadalafil nke nwere ọkara ndụ nke 17.5 awa.
Na mmechi, tadalafil dị mma karịa ogologo ndụ ya. Onye nwere ike ị theụ ọgwụ ahụ na mmetụta ole na ole nwere ike.
Tadalafil mmetụta na uru
Ọtụtụ ndị na-atụle iji tadalafil uzuzu zụta ya n'ihi uru nke tadalafil bụ isi;
Na-emeso nrụrụ erectile
Penile erection bụ usoro dị mkpa maka inwe mmekọahụ. Erectile adịghị arụ ọrụ na-eme mgbe mmadụ enweghị ike ịnweta ma jigide ya. Nke a na - ebute ọtụtụ nsogbu dịka nsogbu, enweghị nsọpụrụ, na ọbụnakwa nsogbu mmekọrịta.
A na-enweta nrụpụta mgbe enwere ọbara zuru oke na amụ. Tadalafil na-enyere aka belata mgbaàmà nke nrụrụ erectile site na ịbawanye ọbara na amụ.
Na-emeso mgbaàmà nke hyperplasia prostatic benign
A na-akpọkwa hyperplasia na-ahụ maka ọrịa prostate na-ebuwanye ibu. Nke a bụ ọnọdụ na-adịkarị na ebumpụta ụwa. Mgbe prostate gland na-ebuwanye ibu, ọ na-apịa mamịrị. Fọdụ n'ime ihe mgbaàmà metụtara na ịbawanye prostate bụ; urination ngwa ngwa na oge, o siri ike ịmalite urination, urination na-egbu mgbu n'etiti ndị ọzọ.
Tadalafil na-erite uru maka ụmụ nwoke na-arịa hyperplasia prostatic benign site na ịkwụsị mgbaàmà ndị a. Tadalafil uzuzu na-enyere aka mee ka gland na-eme ka prostate gland na eriri afọ ya na-ebelata mgbaàmà ndị metụtara eriri afọ na urethra.
Nwere ike ịgwọ ọrịa na erectile na hyperplasia prostatic
Tadalafil nwekwara ike inyere ụmụ nwoke aka na-arịa ọrịa na-erectile ma gbasaa gland prostate n'otu oge.
Mgbe ị na-eji tadalafil mee ihe ziri ezi ma dị ka akwadoro ị ga-erite uru ndị ahụ. Ebe ọ bụ na m na-eme ka ọbara na-asọba na mpaghara penile yana na mpaghara ndị ọzọ, ọ bụ ụzọ dị mma iji merie ọnọdụ ndị a.
A pụkwara iji ya na ịgwọ mgbaàmà ọbara mgbali elu ọbara
Ọbara mgbali elu (PAH) pụtara n'ụzọ pụtara na enwere ọbara mgbali elu dị na akwara akwara na-ewe ọbara site na obi gaa na ngụgụ. Otú ọ dị, ọ dị iche na mgbali elu ọbara mgbe niile.
PAH na-adị mgbe akwara ndị na-enye ọbara na ngụgụ na-adị warara ma ọ bụ na-egbochi obi na-amanye ịmịnye ọbara n'ọtụtụ dị elu. Ọsọ a ma na-amanye obi na-ebute oke nrụgide na akwara.
Tadalafil uzuzu na-eju anya site n'ime ka arịa ọbara dị jụụ. Ntụrụndụ a na-enye ohere maka ịmị nwayọọ nke ọbara wee si otú a mee ka ọnụọgụ na-erugharị. Nke a na - enyere obi aka ịna - amịpụta ọbara dị nro ka ọ na - ebelata nrụgide nke ga - agbakọ
Emeziwanye ikike ịmega ahụ
N'oge mmega ahụ ọbara na-erugharị dị mkpa iji nye mmadụ ohere ịnweta oxygen zuru oke yana iwepụta ike zuru ezu chọrọ.
Tadalafil nwere ike ịkwalite mmega ahụ gị site na ime ka arịa ọbara gị dị jụụ na ịbawanye ọbara.
Mmetụta uto tadalafil kachasị dị na ya gụnyere;
iwe (ọkụ, acha ọbara ọbara, ma ọ bụ mmetụta na-agwụ ike),
mkpọchi ma ọ bụ imi na-agba agba, na
mgbu mgbu, azụ mgbu, na mgbu na aka gị ma ọ bụ ụkwụ.
Tadalafil nwekwara ike ibute nsonaazụ ka njọ. A dụrụ gị ọdụ ka ị chọọ enyemaka ahụike ma ọ bụrụ na ịnwee nke ọ bụla n'ime ihe ndị na-eso tadalafil;
ụfọdụ mgbaàmà obi mgbawa nke gụnyere mgbu obi, mgbu na-agbasa na agba ma ọ bụ ubu, ọgbụgbọ, na ọsụsọ.
ọhụụ na-agbanwe gụnyere nhụhụhụhụhụhụhụhụhụ ọhụụ ma ọ bụ ọhụụ mberede.
Nrụrụ ntị na
na-akụ na ntị gị na ịnụ ntị
Ererụ ụlọ nke na-egbu mgbu ma ọ bụ karịa ogologo oge 4 ka nke a nwere ike imebi amụ gị.
Da mba, dizziness na,
Ike ọgwụgwụ pụrụ iche.
Mmekọrịta ọgwụ nke Tadalafil
Ọtụtụ mkparịta ụka tadalafil na ọgwụ ndị ọzọ ekwupụtala. Mkparịta ụka ọgwụ na-agbanwekarị ọrụ nke ọgwụ ahụ ma nwee ike igbochi ọgwụ ndị ahụ ịrụ ọrụ nke ọma.
Ya mere, a na-adụ gị ọdụ ka ị kwurịta ọgwụ gị tupu ị jiri tadalafil. Tadafọdụ mkparịta ụka tadalafil nwere ike ịdị nro na nsogbu ndị ọzọ.
N'okpuru ebe a bụ mmekọrịta nke tadalafil;
A na-akpọkwa ha ọgwụ Anguina. Mgbe ejiri nitrates na tadalafil, ọ nwere ike ime ka ọbara mgbali elu na-adaba na ọkwa dị ala. Ejikọtara ọnọdụ dị ala nke ọbara mgbali na mgbaàmà ndị dị ka nju anya ma ọ bụ ọbụna ịda mba.
Fọdụ n'ime ọgwụ anguina ndị a gụnyere; butyl nitrite, amyl nitrite, isosorbide dinitrate, nitroglycerin, na isosorbide mononitrate.
Ndị na-egbochi Alpha-blockers
Ihe ndị a bụ ọgwụ eji agwọ ọbara mgbali elu. A na-ejikwa ha ọgwụgwọ prostate. Ma tadalafil na alpha-blockers bụ vasodilators nwere ọbara mgbali na-ebelata mmetụta. Mgbe e jikọtara ya ọnụ, ọ nwere ike ibute ọbara mgbali ike / dị egwu. Nke a na - eme ka mmadụ tụbọọ ma nwekwaa nkụda mmụọ.
Fọdụ ọgwụ ọgwụ alpha-blockers gụnyere; terazosin, tamsulosin, alfuzosin, na prazosin.
Drugsfọdụ ọgwụ nje HIV
Ọgwụ ndị a bụ ndị na-eme ihe na-egbochi proteinase ma ya mere ha nwere ike ime ka ọkwa tadalafil dị n'ọbara bawanye. Nke a na - ebute ọbara mgbali elu. O nwekwara ike ime ka mmadụ ghara ịba uru nke pụtara na ha nwere ụlọ dị ogologo nke na-egbu mgbu.
Fọdụ n'ime ọgwụ ndị a bụ ritonavir na lopinavir.
A kọọrọ mkparịta ụka Tadalafil na ọgwụ nje. Mgbe ejiri ya na tadalafil mee ihe, ọgwụ nje nwere ike ime ka tadalafil dị n'ọbara nke na-eduga n'ịbelata ọbara mgbali. Ya nwere ike ịkpata dizzness, ịda mba, na ọbụna ụfọdụ ọhụụ ọhụụ. O nwekwara ike ime ka mmadụ ghara ịna-amata onye ọ bụ.
Fọdụ n'ime ọgwụ ndị a bụ erythromycin, telithromycin, na clarithromycin.
Agbanyeghị, ụfọdụ ọgwụ nje nwere ike belata ọkwa nke tadalafil n'ọbara. Mkparịta ụka tadalafil ndị a anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọgwụ ndị a gụnyere; rifampin.
Fọdụ ọgwụ ọgwụ na-egbu egbu gụnyere ketoconazole na itraconazole na-emekọrịta na tadalafil.
Ọgwụ ndị a nwere ike ibuli ọkwa nke tadalafil nke na-eduga na nhụjuanya na nkụda mmụọ nwekwara ike ime.
Ndị ọzọ na-arịa ọbara mgbali elu
A maara Tadalafil na ọgwụ ndị ọzọ na-arịa ọbara mgbali elu na ha nwere mmetụta ọbara na-ebelata ọbara. Mgbe e jikọtara ya ọnụ nwere ike ibute ogo ọbara mgbali elu dị egwu. Nke a na - ebute ihe mgbaàmà metụtara ọbara mgbali elu dị ka ọzịza na nkụda mmụọ.
Ọgwụ ndị ahụ gụnyere riociguat.
A na-eji ọgwụ ndị a eme ihe iji belata acid afo. Mgbe ejiri ya na tadalafil, ha nwere ike igbochi absorption nke tadalafil n'ime ahụ. Ha gụnyere magnesium hydroxide ma ọ bụ aluminom hydroxide.
A na-akpọkwa ọgwụ ndị a ọgwụ mgbochi. Mgbe ị na-a drugsụ ọgwụ mgbochi na-ejide ọgwụ na tadalafil, ha nwere ike belata ntinye nke tadalafil. Nke a pụtara na tadalafil agaghị arụ ọrụ nke ọma. Ngwá ọgwụ ndị a na-efe efe gụnyere phenytoin, phenobarbital, na carbamazepine.
Ebee ka ịzụta Tadalafil?
Nwere ike ime Tadalafil zụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ntụ ntụ dị n'ọtụtụ maka ndị na-eme nchọpụta na ndị nyocha. Jide n'aka na ịlele maka ndị na-ebugharị tadalafil uzuzu. Mgbe ị na-eche ị takingụ tadalafil zụta ya n'aka ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi.
Gaa dọkịta gị tupu ị na-ewere tadalafil n'ihi nsonaazụ tadalafil nwere ike yana yana mmekọrịta tadalafil na ọgwụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ Tadalafil ma ọ bụ ndị etiti ya, ị kwesịrị ịlele na CMOAPI maka ezigbo ngwaahịa dị mma. Ogige anyị enwetawo mmesi obi ike dị mma.
Q ： tadalafil dị ike karịa Viagra?
A: 'Dị ka achọrọ' Tadalafil (ọnụọgụ Cialis) nwere uru karịa Sildenafil n'ihi na ọ dị ogologo karịa - ruo 36 awa (ma e jiri ya tụnyere 4-5 awa maka Sildenafil). Fọdụ ụmụ nwoke na-ahọrọ nke a ka ọ na-enye ohere inwekwu obi iru ala.
Ajụjụ: Cialis ọ na-eme ka ị sie ike mgbe ọ bịara?
A: Ejila ya ma ọ bụrụ na ịchọghị ya. O nwere ike imebi ezigbo ihe.
Dị ka ọ dị mgbe ọ bịarutere, ọ ka na-enwe mmetụta dị nro mgbe orgasm gasịrị, a gaghị emetụ ya aka, ma mgbe minit ole na ole dị naanị ịdebe ya mgbe ahụ nwere ike ịga n'ihu.
Ajụjụ: 20mg Cialis dị oke?
A: Mkpụrụ kachasị nke Cialis nke a pụrụ ị inụ n'otu ụbọchị bụ 20 mg. Ikwesighi iji Cialis karịa otu ugboro n'ụbọchị. N'ime ule ahụike, Cialis nyeere ndị mmadụ aka nwere mgbaàmà ED ruo elekere 36 mgbe ọgwụ ha gachara. Yabụ ọ bụrụ na ị na-a theụ ọgwụ ahụ naanị otu achọrọ, ị kwesịghị ị itụ ya kwa ụbọchị.
Ajụjụ: Gini na arụ ọrụ nke ọma viagra ma ọ bụ Cialis?
Azịza: nnukwu ọdịiche dị n’etiti Viagra na Cialis bụ oge ole mmetụta ha ga-akwụsị. Viagra na-adị irè ruo oge 4 ruo 6, nke na-enye ohere zuru oke inwe mmekọahụ n'ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Agbanyeghị Cialis na - enye gị ohere ịmebe ihe ruo elekere 36 mgbe ị nụsịrị otu mbadamba.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka mmadụ ga-anọru?
A: Anrụ ụlọ nwere ike isi na nkeji ole na ole ruo ihe dị ka ọkara elekere. Ná nkezi, ụmụ nwoke na-arụ ọrụ ise n’abalị mgbe ha na-ehi ụra, nke ọ bụla na-ewe ihe dị ka minit 25 ruo 35.
Ajụjụ: Afọ ole ka ụmụ okorobịa si enwe nsogbu isi ike?
A: Ihe dị ka pasent 5 nke ụmụ nwoke dị afọ 40 nwere nsogbu erectile zuru oke, ọnụ ọgụgụ ahụ na-abawanye ruo ihe dịka 15 pasent nke ụmụ nwoke mgbe ọ dị afọ 70. Mmebi erectile dị nro na nke na-adị nfe na-emetụta ihe dịka 10 pasent nke ụmụ nwoke kwa afọ iri (yabụ, 50 pasent nke ụmụ nwoke na 50s, 60 pasent nke ụmụ nwoke na 60s).
Ajụjụ: Ugboro ole ka nwoke kwesịrị ịhapụ spam n’otu izu?
Azịza: n'ihe dịka ị gbasiri ike, n'ihe gbasara ahụike, ị kwesịrị ị na - ewepụta spam kwa ụbọchị atọ rue izu ụka asaa ọ bụla bụ ụbọchị asaa, yabụ ịhụ dọkịta gị dị ezigbo mkpa ịkọwa oge ma ọ bụrụ na enwere nsogbu.
Ajụjụ: Nri ndị dị a helpaa na-enyere gị aka isi ike?
A: Akwụkwọ nri bụ ezigbo isi iyi nri, nke a na-enweta n’ọbara. Folic acid na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọrụ nwoke na nwanyị na erughị eru na folic acid ka ejikọtara site na Isi mmalite nke arụ ọrụ erectile.
Nnyocha achọpụtala na ị drinkingụ iko kọfị abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị nwere ike igbochi nrụrụ erectile. Nke a bụ ekele ọkacha mmasị kọfị: caffeine.
A hụrụ ya na mmiri ọkụ na ose chili, capsaicin na-ebute ntọhapụ nke endorphins - homonụ "na-adị mma" - ọ nwere ike iweghachi libido.
Ajụjụ: tadalafil ọ na - eme ka testosterone too?
A; Ọgwụgwọ na PDE5I tadalafil maka izu iri na abụọ jikọtara ọnụ ọgụgụ testosterone / estradiol na-arịwanye elu na ọrụ nchịkwa ka mma. Tadalafil nwekwara ikike ịbawanye ogo LH, belata cytokines proinflammatory, ma belata oke abụba abụba.
Ajụjụ: Ndi cialis dị mma karịa tadalafil?
A: Nnyocha egosiwo ọgwụ tadalafil na aha ahia ya Cialis iji nwee ọnụọgụ nke 60-70% na-emeso ED. Tadalafil (ọnụọgụ Cialis), dịkwa oke ọfụma.
Ajụjụ: Ndi omume tadalafil na-etolite?
A: Enweghị ihe ọ bụla sayensị na-egosi na sildenafil, tadalafil ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ eji agwọ ọrịa erectile na-eri ahụ.
Ajụjụ: you nwere ike ị tadaụ mmanya na-egbu tadalafil?
A: A drinkụla mmanya na-aba n'anya (dịka, 5 ma ọ bụ karịa mmanya mmanya ma ọ bụ 5 ma ọ bụ karịa obere whiskey) mgbe ị na-ewere tadalafil. Mgbe ị takenụbigara ihe ọ ,ụ alcoholụ ókè, ị alcoholụbiga mmanya ókè nwere ike ime ka i nwekwuo isi ọwụwa ma ọ bụ dizzzz, mee ka obi gị dịkwuo ala, ma ọ bụ belata ọbara mgbali gị.
Ajụjụ: Ndi Cialis na-abawanye testosterone kwa ụbọchị?
A: 5 mg tadalafil kwa ụbọchị mere ka ED dịkwuo mma n'ihi ụba nke testosterone.
Ajụjụ: Gini na - eme ma ọ bụrụ na tadalafil anaghị arụ ọrụ?
A; Ọ bụrụ na ndị tadalafil na ndị ọzọ na-eme ihe PDE5 anaghị arụ ọrụ maka gị, onye na-ahụ maka ahụike gị nwere ike ịtụ aro nhọrọ ọgwụgwọ ndị ọzọ gụnyere (AUA, 2018): Usoro ọgwụgwọ Testosterone: Nnwale ọbara na-egosi obere testosterone. Injections n'ime amụ: Alprostadil na ọgwụ ndị ọzọ.
Q: Gini ga - eme ma oburu na i buru oke tadalafil?
A: Ọ bụrụ na ị na-ewere oke tadalafil ma ọ bụ were ya na ọgwụ ndị a, ohere maka mmetụta dị n'akụkụ ga-adị elu. Ọ bụrụ na ịnweta nrụrụ ogologo oge karịa 4 awa ma ọ bụ ụlọ na-egbu mgbu maka ihe karịrị awa 6, kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo.
Ajụjụ: Tadalafil adịghị mma?
A: tadalafil ọ bụ ọgwụ na-adịghị ize ndụ? N'ozuzu, tadalafil bụ ọgwụ dị mma mana ọ naghị atụ aro ka ewere ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ụfọdụ ma ọ bụ na-a specificụ ọgwụ ụfọdụ nwere ike ịmekọrịta na tadalafil.
Ajụjụ: Mkpụrụ osisi vaịn dị mma maka nrụrụ erectile?
Azịza: ozi gbasara ahụike ezughi oke, mana ụmụ nwoke ndị na-ewere Viagra kwesịrị ịma na mmanya mkpụrụ osisi grape nwere ike ime ka ọbara ọgwụ dị elu. Nke a nwere ike ịbụ ihe dị mma nye ụfọdụ ụmụ nwoke ndị nwere nkwarụ erectile, mana ọ nwere ike ịkpalite isi ọwụwa, iwe iwe, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Ajụjụ: Olee otu m ga - esi mee ka tadalafil rụọ ọrụ nke ọma?
A: 1. Nwee ike dị mma site na mbenata oke akụkụ, iri nri niile, na ịhọrọ nhọrọ ahụike.
2. Kwụsị ise siga na iji ụtaba ndị ọzọ eme ihe.
3.Binyekwuo ọrụ iji nyere aka belata ọbara mgbali elu na cholesterol dị elu.
Q: Ogologo oge ole ka tadalafil na-arụ ọrụ?
A: Ọ na - ewekarị 30 ruo 60 nkeji maka tadalafil iji rụọ ọrụ maka nrụrụ erectile. I nwere ike iwere ya otu ugboro n’ụbọchị, ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị chọọ inwe mmekọahụ.
Q: Ekwesịrị m were Cialis n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị?
A: Tadalafil mbadamba maka ịbawanye prostate-abịa dị ka 2.5mg ma ọ bụ 5mg. Dosedị na-emebu bụ 5mg, were otu ugboro n'ụbọchị. You nwere ike were mbadamba ụtụtụ gị n'ụtụtụ ma ọ bụ na mgbede, mana ọ kacha mma ịnara ya n'otu oge kwa ụbọchị. Dọkịta gị nwere ike inye gị obere ọgwụ nke 2.5mg ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, dịka mmetụta ndị ọzọ.
Q: Enwere m ike ị drinkụ kọfị na Cialis?
Azịza: ahụghị mmekọrịta n'etiti caffeine na Cialis.
Q: Cialis nwere ike ịbelata prostate?
A: Ọkt. 6, 2011 - FDA kwadoro Cialis maka ọgwụgwọ nke ịbawanye prostate. Enwere ike iji ya na-emeso ụmụ nwoke nwere nnukwu prostate na nrụrụ erectile (ED) n'otu oge.
Ajụjụ: Tadalafil ọ na-arụ ọrụ na ụmụ nwanyị?
Azịza: a na-ejikwa ọgwụ a agwọ ọrịa nrụrụ erectile na akara na mgbaàmà nke BPH. A na-ejikwa Tadalafil ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na-agwọ ihe mgbaàmà nke ọbara mgbali elu ọbara iji meziwanye ikike ịmega ahụ.
Ajụjụ: Kedu ka ị si ewere tadalafil maka nsonaazụ kacha mma?
A: Tadalafil (Cialis) dị na ọnyà na ụdị nke ụdị dị iche iche dị ka mbadamba ọnụ. Nwere ike were Cialis dịka ọ dị mkpa ma ọ bụ otu ugboro n'ụbọchị, dabere na ọgwụ na otu esi ede ya. Cialis na-ewe site na minit 30 ruo awa 2 iji nwee mmetụta. Ọ nwere ike ịdịru ruo 36 awa.
Ajụjụ: Enwere m ike iwere tadalafil 20 mg kwa ụbọchị?
A: Mkpụrụ kachasị nke Cialis nke a ga-ewere n'otu ụbọchị bụ 20 mg. Ikwesighi iji Cialis karịa otu ugboro n'ụbọchị. N'ime ule ahụike, Cialis nyeere ndị mmadụ aka nwere mgbaàmà ED ruo elekere 36 mgbe ọgwụ ha gachara. Yabụ ọ bụrụ na ị na-a theụ ọgwụ ahụ naanị ka achọrọ, ị kwesịghị ị itụ ya kwa ụbọchị
Ajụjụ: Enwere m ike iwere 2 tadalafil 5mg?
Azịza: Tadalafil (Cialis) dị na ọnụọgụ na ụdị nke ụdị dị iche iche dị ka mbadamba ọnụ. Can nwere ike were Cialis dịka ọ dị mkpa ma ọ bụ otu ugboro n'ụbọchị, dabere na ọgwụ na otu esi ede ya. Cialis na-ewe site na minit 30 ruo awa 2 iji nwee mmetụta.
Ajụjụ: tadalafil ọ na-ebute ọbara mgbali elu?
A: Mbelata ọbara mgbali n'ime ahụ niile nwere ike ime n'ihi na tadalafil na-eme ka arịa ọbara (akwara) gbanwee ahụ dum. A ghaghị iji nlezianya mee ihe banyere ndị ọrịa nwere ọbara mgbali elu - dịka ọmụmaatụ, ihe na-erughị 90/50 mmHg.
Q: Gịnị bụ mmetụta dị n'akụkụ nke tadalafil?
Azịza: isi ọwụwa, iwe iwe, mgbu azụ, mgbu mọzụlụ, imi imi, ịchachasị ma ọ bụ isi awọ. Ọ bụrụ na otu n'ime mmetụta ndị a adịgide ma ọ bụ ka njọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ na ngwa ngwa. Iji belata ihe ize ndụ nke ịba ụba na ọkụ ọkụ, bilie nwayọ mgbe ị na-ebili ọtọ ma ọ bụ dinara ala.
Q; Enwere m ike iwere tadalafil kwa ụbọchị?
A: Tadalafil (Cialis) bụ otu n'ime ọgwụ ewu ewu na-ewu ewu na-ewu ewu (ED). Ihe kacha amasị ya? Ọgwụ ahụ na-abịa n'ụdị obere nke nwere ike ị dailyụ kwa ụbọchị.
Ajụjụ: tadalafil ọ dị mma maka obi?
Azịza: Mgbe ahụ ndị ọkammụta na-emepe emepe Viagra chọpụtara ọgwụ na-ebelata ED. "Anyị nwere oke ihe akaebe sitere na ọnwụnwa ụmụ mmadụ na ọmụmụ banyere ọrịa epidemiological nke na-egosi Tadalafil nwere ike ịdị irè n'ịgwọ nkụda obi," "
Ajụjụ: tadalafil 5mg ọ dị mma?
A: A na-eji ọgwụ 5mg tadalafil eme ihe kwa ụbọchị na ọgwụgwọ nke nrụrụ erectile na LUTS, nke na-eme ka oge ejaculatory na-egbu oge.
Ajụjụ: tadalafil ọ na-ebelata ọbara mgbali?
A: tadalafi nwere ike belata obere ọbara mgbali. Nke a abụghị nsogbu nye ọtụtụ ndị mmadụ, ma tadalafi 'na-emetụta ọbara mgbali elu bụ ikwubiga okwu ókè ma ọ bụrụ na eji tadalafi ejiri ọgwụ nitrate. Nitrates bụ otu n'ime ọgwụgwọ ndị dọkịta na-enye maka angina.
Ajụjụ: tadalafil ọ dị mma iji mee ka prostate gbasaa?
A: Tadalafil (Cialis) bụ naanị ọgwụ ọgwụ FDA kwadoro maka BPH, nke akpọkwara prostate gbasaa. Ọ na-ede iwu ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịnweta ma ọ bụ debe ụlọ.
Ajụjụ: Tadalafil na-eme ka ị dịtee aka?
A: Olee ọgwụ ndị kachasị dị ogologo? - Cialis (tadalafil). Ọ bụ ezie, Viagra bụ ọgwụ a na-akpọkarị erectile dysfunction, Cialis nwere mmetụta kachasị ogologo oge. Cialis gụnyekwara obere atụmatụ mana nsonaazụ ya nwekwara ike ịdị ogologo oge.
Ajụjụ: Mkpụrụ osisi grepu ọ na-eme ka Cialis sie ike?
A: Iri mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn ma ọ bụ ị drinkingụ ihe ọ graụ graụ mkpụrụ osisi grape nwere ike ime ka tadalafil dị n'ọbara gị dịkwuo elu. Nke a na - eme ka nsogbu gị pụta.
Q: Kedu ihe dị iche na Cialis na Tadalafil?
A: Ogologo oge nke ụlọ ọrụ ka akwadoro FDA iji mepụta tadalafil maka ịgwọ ED na BPH. Versionsdị Generic nke Cialis nke FDA kwadoro bụchaghị nke ọma na nchekwa dị ka aha Cialis. Versionsdị ọnyà na-erughị ọkara ụgwọ.
Q: Enwere m ike imebi Cialis na ọkara?
n'ihe dịka ị dị mma, ahụike ị ga-ewepụta spam kwa ụbọchị 3 ruo izu 1 ọ bụla bụ ụbọchị asaa, yabụ ịhụ dọkịta gị dị ezigbo mkpa ịkọwa oge ma ọ bụrụ na enwere nsogbu.
Penedones A, Alves C, Batel Marques F (2020). "Ihe ize ndụ nke nonarteritic ischemic optic neuropathy na phosphodiesterase type 5 inhibitors: nhazi nhazi na meta-analysis". Acta Ophthalmol. 98 (1): 22–31. ma ọ bụ: 10.1111 / aos.14253. PMID 31559705.
"FDA na-ekwuputa nyocha maka aha nke Cialis, Levitra na Viagra". Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na US (FDA). 2007-10-18. Edere site na mbụ na 2016-10-22. Weghachite 2009-09-28.
"Cialis tadalafil PI". Nchịkwa Ngwaahịa ọgwụgwọ. Weghachite 2020-08-19.
Karabakan M, Keskin E, Akdemir S, Bozkurt A (2017). Mmetụta nke tadalafil 5mg ọgwụgwọ kwa ụbọchị na oge ejaculatory, obere mgbaàmà urinary tract na ọrụ erectile na ndị ọrịa nwere nrụrụ erectile. International Braz j Urol: Akwụkwọ akụkọ nke Brazil Society of Urology. 2017 Mar-Apr; 43 (2): 317-324. DOI: 10.1590 / s1677-5538.ibju.2016.0376.
"Pill Splitting" (PDF). Ndị Ahịa na-akọ Ahụ Ike. 2010-01-25. Edebere ya na mbụ (PDF) na 2008-10-08.
Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y (Jenụwarị 2018). "Tadalafil 5 mg Ozugbo ụbọchị na-eme ka ihe mgbaàmà nke obere Urinary Tract na Erectile Dysfunction: A Review Review and Meta-analysis". Ala Urin Tract Mgbaàmà. 10 (1): 84–92. ma ọ bụ: 10.1111 / luts.12144. PMID 29341503.